musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Zimbabwe Breaking News » A New Monster COVID Virus: Evades Vaccine, Inopararira nekukurumidza
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Health News • nhau • Zimbabwe Breaking News • UK Kuputsa Nhau
Vaccinated kana kwete- izvi zvinogona kusaita mutsauko mukuru kune itsva COVID Virus, vamwe vava kudaidza chikara.
Kusiyana uku kuri kupararira muSouth Africa.
Musiyano uchangobva kuzivikanwa wekoronavirus wapararira muSouth Africa ndiwo wakanyanya kutariswa nevakuru vehutano vekuBritain sezvo wakawedzera zvakapetwa huwandu hwekuchinja kweDelta mutsauko unosanganisira humwe hune hukama nekunzvenga immune immune.
Mutyairi aifamba achibva kuSouth Africa akaunza hutachiona uhu kuHong Kong uye parizvino ari ega panhandare yendege. Mumwe mufambi muBotswana aive nemusiyano mutsva.
UK Health Security Agency yakati musiyano - unonzi B.1.1.529 une spike protein yaive yakasiyana zvakanyanya neiyo yaive muconavirus yekutanga iyo COVID-19 vaccines yakavakirwa pairi.
Iyo ine shanduko dzinogona kunzvenga mhinduro yekudzivirira inogadzirwa zvese nekutanga kutapukirwa uye vaccination, uye zvakare shanduko dzine chekuita nekuwedzera hutachiona.
Zvichipindura, South Africa, Botswana, Eswatini, Lesotho, Namibia neZimbabwe dzichapinda parunyorwa rutsvuku na12.00 masikati eChishanu 26 Mbudzi.
Pachave nekurambidzwa kwese kwakananga kutengeserana uye ndege dzepachivande kubva kunyika idzi kubva 12.00 masikati Chishanu 26 Mbudzi kusvika 4 am Svondo 28 Mbudzi.
Kana wanga uri mune imwe yematunhu aya ukasvika muEngland pakati pe12.00 masikati neChishanu 26 Mbudzi na4 am Svondo 28 Mbudzi, iwe:
inofanirwa kutevera nhungamiro yakakosha yekuti ungapedzisa sei fomu renzvimbo yemufambi
fanira kugara ndega kumba kana kuti pane imwe nzvimbo yakakodzera yekugara
anogona kuwana vakasununguka Pcb bvunzo dzekutora panguva yekuvharirwa
Cuthbert Ncube, Sachigaro we African Tourism Bhodhi akati: African Tourism Board iri kutevera nhau idzi nekunetsekana kukuru. Takagadzirira kutarisana nedambudziko iri uye kumira nenhengo dzedu pamwe nekushanya sezvatakaita panguva yese iyi dambudziko. "
Nigel Vere Nicoll, Mutungamiri we ATTA akati:
"Chiziviso chakaitwa neMunyori wezvehutano kuUK, Sajid Javid manheru ano chekuti nekuwanikwa kwemhando itsva yeCovid, nyika nhanhatu dzekumaodzanyemba kweAfrica dzichawedzerwa kuUK runyorwa rutsvuku kubva masikati neChishanu GMT, nendege dzakarambidzwa kwenguva pfupi. kuridza nyundo kunhengo dzedu dzese. Kunyange kuchengetedzwa kwevose vanobatanidzwa kunofanirwa kutariswa, zvinorwadza moyo kuti izvi zvakaitika kune indasitiri iri kunetsekana kuti idzoke pamakumbo ayo mushure memwedzi makumi maviri yapfuura.
Tichashanda pamwe chete nehurumende dzeSouth Africa, Namibia, Zimbabwe, Botswana, Lesotho, neEswatini kuti tinzwisise zvizere kushanda kwechiziviso ichi uye kuti tingatsigira sei nhengo dzedu nevatengi vadzo.